Umbhali: Thuthukisa, Shicilela, futhi usebenzise Umhlahlandlela Wezwi Nesitayela Womkhiqizo Wakho Ngalo Msizi Wokubhala we-AI | Martech Zone
Njengoba nje inkampani isebenzisa umhlahlandlela wokumaketha ukuze uqinisekise ukuvumelana kuyo yonke inhlangano, kubalulekile futhi ukuthuthukisa izwi nesitayela ukuze inhlangano yakho ihambisane nemiyalezo yayo. Izwi lomkhiqizo wakho libalulekile ukuze ukhulume ngokuhlukana kwakho ngempumelelo futhi ukhulume ngokuqondile futhi uxhumane ngokomzwelo nezithameli zakho.
Uyini Umhlahlandlela Wezwi Nesitayela?
Nakuba imihlahlandlela yokubeka uphawu ebonakalayo igxile kumalogo, amafonti, imibala, nezinye izitayela ezibukwayo, umhlahlandlela wezwi nesitayela ugxile ku-verbiage, amatemu, nephimbo esetshenziswa umkhiqizo wakho lapho abantu belalele noma befunda ngawe.
Kunezici ezimbalwa zomkhiqizo okufanele uzihlanganise kumhlahlandlela wezwi lakho nesitayela:
I-Personas - yiziphi zonke izici zamasiko, izibalo zabantu, imfundo, kanye nezindawo zekhasimende lakho oliqondisayo?
ukubona - imuphi umbono ongathanda ukuthi abantu bakho babe nawo ngomkhiqizo wakho?
Mission – siyini isitatimende senhloso yomkhiqizo wakho?
Tone - iliphi ithoni yezwi ofisa ukulisebenzisa ukuze uthintane kahle nezithameli zakho? Ingabe ufuna ukuba ongakahleleki, omuhle, onamandla, oyingqayizivele, odlalayo, okhuthazayo, njll.
Umqondofana - yimaphi amagama afanayo nomkhiqizo wakho, imikhiqizo, noma izinsizakalo ofuna zisetshenziswe njalo?
U-Antonymy – yimaphi amagama okungafanele asetshenziswe ukuchaza umkhiqizo wakho, imikhiqizo, noma amasevisi?
Umzenzisi – yimaphi amagama aqondene nemboni noma inhlangano yakho okufanele ahambisane?
Custom - yimaphi amagama ajwayelekile omkhiqizo wakho, umkhiqizo, noma isevisi okungekho muntu oyisebenzisayo?
Isibonelo: Elinye lamaklayenti ethu angukhiye linesayithi lapho ungakwazi khona oda izingubo online. Izingubo zokugqoka zinenani elilinganiselwe kodwa ezekhwalithi ephezulu, sisebenzisa amagama afana nokuthi athengekayo ngaphezu kokushibhile… okungaba nomqondo ongemuhle wekhwalithi. Siphinde sithi akukho-ukuhlupheka ubuyisela esikhundleni -ngenazinkinga izimbuyiselo. Nakuba zombili zinencazelo efanayo, zinegama khulula kuyo yonke isayithi izobeka ithoni engalungile uma sikhuluma nabantu abavakashela isayithi - abesifazane abadala.
Umbhali: Umsizi Wokubhala we-AI Wamaqembu
Abantu abaningi bahlanganisa umhlahlandlela wezwi nesitayela kanye nomhlahlandlela wabo wokumaketha obonakalayo ukuze abasebenzi abasha noma osonkontileka bangashintshashintsha ekuthuthukiseni okuqukethwe komkhiqizo. Ingase ifakwe ngobunono ku-PDF esakazwayo lapho iceliwe. Nakuba lokho kuzwakala kuwusizo, akunjalo kakhulu kungenzeka njengoba abantu abathanda ukuvumelana kwezwi lakho kuphela abangabeka izwi lakho nomhlahlandlela wesitayela ozowusebenzisa.
Umlobi i-artificial intelligence (AI) umsizi wokubhala wamaqembu anakho konke okudingwa yiqembu lakho. Ngokuya ngephakheji oyibhalisele, ungathola izici ezilandelayo:
Lungisa ngokuzenzakalelayo futhi uqedele ngokuzenzakalelayo amaphutha esipelingi, izimpawu zokubhala kanye nohlelo lolimi.
Amazwibela - amazwibela omuntu siqu naweqembu emishwana evamile noma umbhalo osetshenziswa kaningi.
Izincomo - izincomo zokuthuthukisa ukubhala kwakho.
Amatemu - ithuluzi lokuphatha amagama emigomo egunyaziwe, esalindiwe, nengavunyelwe.
Isitayela Sokubhala - okuqondiwe kokufundeka, osonhlamvukazi, ukubandakanywa, ukuzethemba, kanye nokwenza ngokwezifiso ukucaca.
Iindima Zeqembu - izindima nezimvume zokuthuthukisa amagama akho nezilungiselelo zezwi uma kuqhathaniswa nabasebenzisi okudingeka bakusebenzise.
Umhlahlandlela wesitayela - inkomba yesitayela esingethwe, eshicilelwe, nengase ibe yenhlangano yakho.
Umlobi isebenza ku-Chrome, Microsoft Word, ne-Figma. Futhi bane-API eqinile yokuhlanganisa ithuluzi labo ezinqubweni zakho zokuhlela.
Zama Umbhali Mahhala
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Umlobi futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sobulungu kuso sonke lesi sihloko.
Tags: aiisiphikisoukuhlakanipha okungekhona okwangempelaumgomo womkhiqizoukubona komkhiqizoizwi lomkhiqizochromei-figmaisheke lohleloi-hyponymyizwi leMicrosoftumlingisiukuhlola izimpawu zokulobaukuhlola ukupelaumhlahlandlela wesitayelaumqondofanaisichazamazwiithoniizwiumhlahlandlela wezwi nesitayelaumlobiumsizi wokubhala